Indlu encinci ehlathini, ezantsi kweTerminillo
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguValeria
UValeria ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
"I-La costa del Sole" yindawo yokuhlala ehlala iimitha ezingama-800 ukusuka kwisikwere esikhulu saseMonte Terminillo. Indawo yethu encinci inethamsanqa kakhulu; i-terrace ijonge umgangatho wesibini ekunene kwikona "ekungeneni" kwehlathi elijikeleze yonke i-consortium. Ke ngoko izimele kakhulu kunabanye kwaye unokuchitha ixesha elimnandi lelanga, umoya omtsha kunye nokuphumla.
Ilungele ukuhlala kwisifundo kunye nokugxila okanye kwisibini esibalekayo esixekweni.
Ezincinane abandamkela, kutshanje landlelwe abo bafuna ukunandipha ngeholide emfutshane, yinto isiseko esihle lokuhlola indawo, indawo yomtsalane kubathandi sibethwe ngumoya, yaye iindlela kwindalo ehlotyeni, ongangokugibisela ilitye ukusuka kumathambeka ski le Terminillo ebusika. Ifulethi libonakaliswa ngokukhanya okungena kuhluzwa ngamasebe emithi; ujonge phandle ungqongwe buluhlaza namdaka wehlathi.
Yindawo enomtsalane kakhulu kwabo bathanda ukuhamba okanye ukuhambahamba. Ehlotyeni, abantu abaninzi babaleka ezixekweni baze bazimele kwindawo epholileyo kumadlelo amakhulu okanye emahlathini akhoyo kuwo wonke loo mmandla. Ukuhamba ehlathini ukuya eTerminillo (embindini) kuthatha malunga nemizuzu engamashumi amabini, ngelixa ngemoto kwindlela enkulu unokufika ngaphantsi kwemizuzu emibini.
Indlu incinci kakhulu njengoko unokubona kwiifoto, kodwa inayo yonke into oyifunayo yobubele, ngoko siyathemba ukuba akukho nto ilahlekileyo kwaye uyayifumana ikhululekile kwaye yamkelekile!
Eyona nto ingcono kukuba xa kuthelekiswa namanye amagumbi kwi-condominium, eyethu ikwimeko entle kakhulu ... inethamsanqa lokwenza ikona kwaye ngenxa yoko ibe neenkuni hayi emva kwayo kuphela (umbono wegumbi lokuhlambela kunye negumbi lokulala) kodwa kwakhona kwimibono yangaphambili kwaye ngaphezu kwakho konke ukusuka kwi-terrace, ejongene nokuqala kwendlela yehlathi ... kuyamangalisa ukubona imithi kuphela kwiifestile kwaye uzive ukuthula ngokupheleleyo!
Ifumaneka nangaliphi na ixesha, ndiya kuhlala ndizifumana ndiseRoma; I-concierge yethu entle iya kukwamkela, ikubonise yonke into oyifunayo kwaye iya kufumaneka ukuphendula imibuzo yakho.